Incazelo Lesitshalo namacebo ngetheyiphu lace. imihlobiso Crochet ahlobene amaphethini
knitters abaningi, esenesikhathi nokuzama isandla sakho at kokudala imikhiqizo elula, nge sikhathi bazimisele ku imisebenzi eminingi. Emkhakheni ngenalithi esindayo kakhulu ukuba ngisithwale Indwangu uthathwa, yakhiwa izingcezu ehlukene axhunyiwe. Lapha, wonke amakhono adingekayo kanye namakhono craftswomen. Ngokuba abanjalo ukunitha izinaliti bese ukukhilosha (noma ngaphandle wesifunda) kuyahluka kakhulu kusukela bendabuko yokukhiqiza web bushelelezi.
Izinhlobo imidwebo ubhala
Imikhiqizo ehlobene eminingi amaphethini ngenxa yezizathu ezahlukene, kuba ekhangayo futhi ukubukeka umxhwele. Akumangazi ukuthi kukhona eningi amasu ezikuvumela ukwenza bese uxhuma izinto ababezenzile. Phakathi ezivamile:
lace Irish (izisusa phezu igridi).
Ukuqhathanisa izisusa geometrically lesifanele ncamashí okwenyanga.
Romanian backoff lace (izintambo ukukhilosha, futhi compounds kanye openwork usebenze ngenaliti).
A lewebhu lace iribhoni.
enye yalezi zindlela, inhlanganisela yawo noma inhlanganisela yalezi zinto amasu nge web okuqhubekayo kungasetshenziswa imikhiqizo yokukhiqiza.
Iribhoni isikimu lace: ukukhilosha obumbene lula!
Kwemigomo openwork Indwangu opholile kuba lula kakhulu kunokuba Ukuthunga amakhulu izimbali ezincane. Kodwa akunjalo elula njengoba kungase kubonakale efika kuqala. Uleyisi itheyiphu yakhiwa izakhi eziningana ezifanayo, zilandelana exhunywe ngaphandle kokuphazamiseka ngentambo futhi wahlela ngendlela ethile. Ngokuvamile, tape lace scheme, ingwegwe ixhunyiwe, iqala nge lonke isinqamu, futhi zonke ezinye izinto ibukeke neengcezu yayo. Ngokwesibonelo, labo kutjengiswe Wezikimu ngezansi. Le ndlela imibala yenza.
Lokhu lace ubukeka obunobunye. It uyakwazi ukuhlobisa isiphi isambatho: izingubo zakhe zokugqoka noma ihembe collar. Ngenxa yokusebenzisa kwakhe ukunitha lokuluhlaza anemibala ehlukene. Ngokuqondene wesifunda, kubukeka njengoba kukhonjisiwe esithombeni ngezansi.
Enye samuntu izikimu tape lace (hook). Umkhiqizo izophelelisa isithombe sakho, okwenza kube licace nokuningi yasekuqaleni. Ngesikhathi esifanayo i-ukukhiqizwa yayo akudingi isikhathi esiningi kanye nezinsiza. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka enhle kakhulu nenhle.
amateyipu okunjalo ingaqoqa ezihlukahlukene izinto:
Futhi, avame ukusetshenziswa njengoba izinto zokuhlobisa. Basuke ehlotshiswe izinto ezihlobene elula amaphethini okuqinile noma openwork. Noma ngisho ithungwe ku zokugqoka. Ngaphezu kwalokho, amaphethini kanye iribhoni lace zisesilinganisweni kuhle kakhulu ekudaleni izinto ezihlukahlukene Decor Ingaphakathi:
Zokudla kuhlanzekile yini.
Le mikhiqizo kungenzeka ngokuphelele sakhiwa openwork amakhasethi noma nje engase aklonyeliswe nabo.
Izimfihlo ukunitha intambo iribhoni
Sicela uqaphele ukuthi izinsalela openwork ibhande engathandeki ukuzama ukuxhuma inqubo ukunitha. Nakuba omagazini abaningi futhi sipho nje indlela enjalo izakhi imephu, ke cishe never kuyazuzisa. Ngokuvamile wavuma iphutha uxhumano kutholwa uma isivele ixhunywe inqwaba Motifs semi isiyingi, futhi bonke ngothi lwabo babe ukuncibilikisa.
Ngaphezu kwalokho, kuba lula kakhulu babeka ukulungele ovezwe iphethini bese uhlela isikhundla sawo kunokungenela ukuthola ishidi opholile akuyona ubukhulu kwesokudla noma ukumisa. Isici esibalulekile salo ibhande ezithinta hook lace isikimu ezihlobene, kuyinto asymmetry yabo. Ixhuma izakhi ku lonke ngendwangu kungcono ngababili. Ngalinye pair of tape kufanele lifake specularly sibonakalisa nomunye. Uma zonke izingcezu kukhona luhamba luye ohlangothini olulodwa, awukwazi ukukugwema skewing kuwebhu.
Indlela elula tape lace
Amaphethini nokuboniswe imidvwebo ngezansi, singasho sithi uhlobo tape lace, nakuba kungabuye ngokuthi emngceleni.
Ijezi kudabuke ezinjalo - umsebenzi kahle elula. isicelo wabo njengoba ukuthi bendabuko iribhoni lace okufanayo: indlela ukuhlobisa imikhiqizo, futhi ngokwenza obunamaparele Indwangu. amaphethini ezinjalo ukuma kucace kakhudlwana weJiyomethri, okuyinto kusiza kakhulu uxhumano yabo. Amaqhinga anjalo kubalulekile uma uhlose ukwenza ibhande wathungela, openwork isibambo izikhwama noma izinto zokuhloba ngezansi kwanoma iliphi ngendwangu.
Tape lace kuhlangene ubuchwepheshe Irish
Kubukeka omkhulu cishe kunoma iyiphi lace (ukukhilosha). AmaSu eteyipini, Irish, Romanian kanye nezinye izinhlobo zihluke kakhulu. Bona ingahlanganiswa kwaba nabantu bezizwe ezixubile zihlanganisa izakhi ezihlukahlukene. Ngokwesibonelo, intambo Irish sakhiwa sebuningini izisusa ezimibalabala noma esingabonakali, igridi sixhumene.
Ngokuvamile amakhosi uthanda kancane lula umsebenzi nendawo phakathi eyodwa noma ngaphezulu imibala lace kuze kudabuke umhlane.
Is iphethini ezifincizekile ezifana nezimpiko kanjani iziketi? Ukubalwa Indwangu, ukuzisika futhi ethunga
Kanjani obukhulu amaphethini ukukhilosha: isikimu kanye nencazelo
Indlela ukupheka pancake kusuka amazambane: elula futhi ezihlwabusayo kakhulu!
Salad "uphehle" isisindo ukulahleka. Salad "uphehle" ngoba wamathumbu ukuhlanzwa
Izitsha zokudla. Inkukhu amabele steamed e multivarka
Polyethylene amapayipi: Ukucaciswa kanye nencazelo